रचनात्मकता Comments टिप्पणीहरू सेप -२-20-२०२०
प्रिय पाठकहरू, हामीले अघिल्लो लेखमा पूर्व-विरूपण मोल्डलाई नियन्त्रण गर्न डिजाईन सेक्सनको बारेमा कुरा गर्यौं (हावा र पानी ट्या tank्की भागको विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? - डिजाइन खण्ड), तर राम्रो डिजाइनको आधार हो - हामीलाई पनि आवश्यक छ। वास्तविक मोल्ड परीक्षण परिणामको आधारमा आयाम समायोजित गर्न धेरै परिमार्जन कार्य गर्दछ। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, विभिन्न भागमा फरक ज्यामिति हुन्छ, त्यसैले विभिन्न मोल्डिंग स्थिति फरक समाधानहरू मिल्नु पर्छ। ठीक छ, कृपया मलाई अनुसरण गर्नुहोस् हामीले के हल गर्ने छौं भनेर जान्नको लागि।
सामान्य बोल्दा, सामान्यतया हामी मोल्डलाई अफ-अफका लागि तयार पार्नको लागि times पटक मोल्ड ट्रायल चाहिन्छ, र प्रत्येक परीक्षणको मोल्ड पूरा योगदान गर्न यसको भूमिका हुन्छ।
T0 ट्राउट हाम्रो टीमको आन्तरिक कार्य मोल्ड प्रकार्य जाँच्नको लागि हो, र पूर्व-विरूपणको परिणाम प्रमाणित गर्दछ जुन हामीले डिजाइन गरेका छौं वा मोल्डमा बनाएका छौं वा हुन् सही हो।
अंश वास्तविक विकृति को डेटा प्राप्त गर्दै (आधार अन्त सतह, ट्यूब orifice, फिटिंग प्वाल, विधानसभा बकल…)
मोल्डका सबै मुद्दाहरू फेला पार्न प्रयास गर्नुहोस्, कुनै कुरा स्पष्ट वा लुकाइएको छैन - उदाहरणका लागि: मोल्ड खोल्ने / बन्द गर्ने कार्य, मोल्ड इजेक्शन कार्य, सामग्री भरण सन्तुलन स्थिति ， पार्ट डि-मोल्डिंग स्थिति, फ्ल्यास र शर्ट-शोर आदि।
सामान्य स्थिति २ 24 घण्टामा नि: शुल्क स्थितिको साथ नमूना रहन, त्यसपछि तिनीहरूको आयामहरू मापन गर्नुहोस् (आयाम रिपोर्ट केवल भित्री परिमार्जनका लागि मात्र) विशेष गरी खुट्टाको क्षेत्र जाँच गर्न, जस्तै सीधापन, उदाई, खुट्टाको उचाई र मोटाई। किनभने खुट्टा क्षेत्र जहिले पनि मापन डाटामको रूपमा। एक पटक T0 आयाम रिपोर्ट उपलब्ध छ, त्यसपछि वेल्डिंग द्वारा त्यो अनुसार मोल्ड परिमार्जन गर्नुहोस्।
T0 पछि आयाम परिमार्जनको बारेमा, केवल समतलता, सीधापन र लम्बको ख्याल राख्छ।
T1 प्रयासका लागि, सामान्यतया ग्राहकहरू मोल्ड ट्रायलको लागि हामीसँग सामेल हुनेछन्। र हामीले T1 बाट तलका लक्ष्यहरू महसुस गर्नुपर्छ।
मोल्ड प्रकार्य र आन्दोलन ठीक हुनुपर्छ, र इन्जेक्शन स्थिति एक स्थिर स्थितिको साथ चलाउनुपर्दछ।
नमूना आयाम खुट्टा क्षेत्र सीधाता, समतलपन र लम्बाइमा लगभग ठीक हुनुपर्दछ।
२ hours घण्टा पछि, नमूनाहरू मापन गर्दै (पूर्ण आयाम रिपोर्टहरू ग्राहकलाई पठाइनेछ) र परिणाम अनुसार मोल्ड संशोधन कार्य गर्न।
कोर इन्सर्टको नरम स्टीललाई हार्ड स्टीलको लागि बदल्दै। यस बीच चेकलिस्ट तयार गर्न उपकरण र मानक भागहरू जाँच गर्नुहोस्।
सीधाता, उदासी र लम्बता को बारे मा केहि सानो समायोजन गर्दै।
सबै स्थिति सहनशीलता अनुकूलन गर्दै।
T2 प्रयास को लक्ष्य हो:
सहिष्णुतामा पाइप, ब्रेक्ट्स र क्लिपहरूको 95% स्थिति आयामहरू। नमूनाहरू नाप्न र जाँच गर्न को लागी कुनै NG आयाम रहन्छ।
१००% सीधाता, समतलपन र लम्बता सहिष्णुता मा छन्।
सम्मिलितहरू बीच सबै बेमेलहरू ०.१ मिमी भित्र छन्।
T2 नमूनाहरू प्रकार्य र असेंबली परीक्षणको लागि ग्राहकलाई बुझाउनु पर्छ, यदि कुनै परीक्षणबाट कुनै प्रतिक्रिया छ भने ग्राहकसँग सञ्चार। यदि ईन्जिनियरिंग परिवर्तन बिना नै हामी मोल्डलाई तालिकाको रूपमा परिमार्जन गर्नेछौं।
सबै आयामहरू अनुकूलन गर्दै।
T3 ट्राउट मोल्ड पूर्ण रूपमा आयामहरू र नमूना मुद्दाहरूको पूरा गर्नुपर्दछ।
उपकरण अनुमोदन ट्राउट (TA वा T4) लगातार २--4 घण्टा चल्नु पर्दछ मोल्ड प्रकार्य र नमूना गुण प्रमाणित गर्न। ट्रायआउट समाप्त भएपछि अन्ततः शिपमेंट भन्दा पहिले मोल्ड जाँच गर्नुहोस्।
माथि पूर्व-विरूपण मोल्ड संशोधनको प्रक्रिया सारांश छन्। विस्तृत जानकारी कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् harry@enuomold.com
तपाइँको समय को लागी धन्यवाद!
- अघिल्लो पोष्ट
तपाइँलाई लाग्दैन कि हाम्रो सानी केटी टुलिंग वर्क शपमा अझ सुन्दर छ
- अर्को पोस्ट
अक्टूबर २ 26-२०२०
सेप -१ 14-२०२०
जुलाई २ 28-२०२०
वायु र पानी ट्या tank्क भाग को विकृति कसरी नियन्त्रण गर्ने? - अनुभाग खण्ड
जुलाई २ 27-२०२०
पारदर्शी खाना-बक्स मोल्ड ग्राहकलाई पठाइयो
वैज्ञानिक टुली ?्ग ट्रायल के हो?
जुलाई २ 25-२०२०
जुलाई २ 24-२०२०
तातो स्प्रिंग + रमाइलोको लागि वन फ्रिफ्टिंग! नमस्ते साथीहरु, हेर्नुहोस् अमेरिकी कसरी तपाईंको मोल्ड स्तर न्याय गर्दछ!